Etu esi wụnye Discord na Linux | Site na Linux
Otu n'ime ụlọ mkparịta ụka kachasị ngwa ngwa maka egwuregwu na oge ndekọ na-aghọ ọkacha mmasị nke ndị egwuregwu ahụ Nsogbu. Ọ nwere ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke nhọrọ, ọ dị mfe iji, ngwa ngwa, yana ijikọta na nyiwe egwuregwu dị iche iche, ... N'agbanyeghị ịnwe nkwado maka ọtụtụ nyiwe, Gbanyụọ na Linux ọ nweghị nkwado zuru oke ma ọ bụ naanị na mpaghara nnwale ahụ.
na Gbanyụọ ndị mmepe kee a Atụmatụ nkwado Linux na ha ọbụna wepụtara ibuo version akpọ 'Agbanye Canary'nke enwere ike itinye ugbu a ma jiri ya na Linux distros dị iche iche. O doro anya na ọ bụghị zuru oke, mana ọ na-arụ ọrụ nke ọma, ma ọ bụrụ na ị bụ onye gamer gịnị kpatara iji ya?
Gbanyụọ na Linux
1 Gịnị bụ Ogbaaghara?
2 Wụnye Discord na Linux
2.1 Wụnye Discord na Debian / Ubuntu
2.2 Wụnye Discord na Fedora
2.3 Wụnye Discord na OpenSUSE
2.4 Wụnye Discord na Arch Linux
2.5 Wụnye Discord na Gentoo
3 Mmechi na Discord na Linux
Gịnị bụ Ogbaaghara?
Nsogbu Ọ bụ Ngwa VoIP Ezubere maka obodo egwuregwu, nke na-enye ohere olu na ederede nkata n'etiti egwuregwu, ọ bụ kpam kpam free, mma ma na-arụ ọrụ na Linux, Microsoft Windows, Mac OS X, Android, iOS na ihe nchọgharị weebụ.
Ọ bụ ihe magburu onwe ya na TeamSpeak na Ventrilo dị oke ọnụ, na mgbakwunye na inwe nkasi obi na ịba uru karịa Skype, atụmatụ ndị a emeela Discord nwe nke oge a karịa ndị ọrụ 26 nde.
Wụnye Discord na Linux
Wụnye Discord na Debian / Ubuntu
Versiondị 'Agbanye Canary'akwakọbala maka nkesa ndị Debian. Ndị ọrụ nke Debian, Ubuntu, Mint, ma ọ bụ nke ọ bụla sitere na ya, ekwesịghị inwe nsogbu ọ bụla na nbudata ya .deb site na peeji nke Discord, nke ị nwere ike iwunye na njikwa ngwugwu kachasị amasị gị. I nwekwara ike ịgbaso usoro ndị a:
Ozugbo ịmechara nbudata, wụnye ya dpkg.
$ sudo dpkg -i/ụzọ/to/discord-canary-0.0.11.deb
Ozugbo mere, i nwere ike na-agba ọsọ ngwa, na ọ nwere ike na-adị mfe emelitere.
Wụnye Discord na Fedora
Enwere ngwugwu maka Fedora nke 'Agbanye Canary', ọ dị na nchekwa Copr, dịkwa maka nbudata.
# dnf copr enyere vishalv / discord-canary # dnf wụnye discord-canary
Wụnye Discord na OpenSUSE
Discord enweghị ngwungwu maka OpenSUSE, mana ị nwere ike ịgbanwe nchịkọta Debian ngwa ngwa Alien edemede. Maka nke a, ị ga-ebudata ngwugwu ahụ .deb.
Jirizie Alien iji tọghata ndị .deb nwere a .rpm.
$ ọbịa -r -c discord-canary-0.0.8.deb
Mgbe Alien Emechara, wụnye ngwugwu na Yast2.
Nke a abụghị azịza zuru oke, mana ọ na-arụ ọrụ mgbe ị na-ekepụta onye ahịa Discord maka OpenSUSE.
Wụnye Discord na Arch Linux
Onwere ngwungwu ndi anaghi achota 'Agbanye Canary'na AUR, nke ị nwere ike ịnweta site na URL ndị a, https://aur.archlinux.org/packages/discord-canary/, I nwekwara ike ibudata echichi nchịkọta site nahttps://aur.archlinux.org/cgit/aur.git/snapshot/discord-canary.tar.gz. N'ọnọdụ ahụ ị ga-ewepụsị taa ahụ, gaa na ndekọ ahụ cd jirikwa ya wue ya makepkg.
$ cd / ụzọ / ka / discord-canary $ mkpkg -sri
Wụnye Discord na Gentoo
Nwere ike tinye Discord machie ka Gentoo iji layman.
Wee tinye Discord na ederede a nabatara. Na /etc/portage/package.accept_keywords
x11-misc / esemokwu
Mgbe nke a gasịrị, ị nwere ike ịpụta dịka ngwugwu ọ bụla
# pụta - wepụta x11-misc / discord
Mmechi na Discord na Linux
Mkparịta ụka na Linux ka bụ ụdị nnwale nke ngwa ọrụ nkwukọrịta a kachasị mma n'etiti ndị egwuregwu, enwere ike ịnwe ụfọdụ njehie iji dozie, nke a ga-akọrịrị na a ga-edozi. Agbanyeghị na n'oge a, ọ bụghị nke kachasị mma n'ime ihe ndị a, ọ gafere nhọrọ nke ịmepe ihe nchọgharị ka anyị na-egwu egwu, ị gaghị enwekwa mkpa iji Windows iji ya.
N'otu ụzọ ahụ, ngwá ọrụ a nwere atụmatụ niile iji nwee ike isoro ndị anyị na ha na-egwu egwuregwu kpaa nkata nke ọma, na-egosipụta njikọta na akụkọ egwuregwu anyị yana ohere ịmepụta sava nzuzo.
Na ozi sitere na LinuxConfig
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Etu esi wụnye Discord na Linux
Ezigbo Luigys: Echere m na ọtụtụ ndị na - agụ akwụkwọ ga - ahụ na DesdeLinux na - ekwu maka nkesa dị iche iche na edemede ya. Ndeewonu !.
Ọ dị mma, achọburu m ụdị ihe ahụ ka mụ na ọtụtụ ndị enyi nwee ike igwu Dota. Mgbe oge wụnye ya, ekele ngwere.
Wụnye nsụgharị 0.0.15 na emepeuse ọ naghị amalite nke ọma: /, ọ na-egosipụta njehie, ọ bụrụ na m dozie ya, m na-ekwu
Ndewo, a na m anwa ịwụnye esemokwu na Arch Linux (Manjaro KDE) na mgbe m tinyere iwu ikpeazụ "mkpkg -sri" ọ na - agwa m na "ahụghị iwu ahụ". Agbalịrị m ịwụnye ya site na octopi / pacman / yaourt mana ihe ndị a niile na-enye m nsogbu iji chịkọta libc ++.
Enwere m olileanya na ị nwere ike inyere m aka ma kelee gị tupu oge eruo ^^
Enwere obere okwu na Debian 11 Bullseye. libappindicator1 adịghịzi na ebe nchekwa. Ụfọdụ ndị mmadụ na -atụ aro iji libayatana dị ka onye nnọchi… mana enwebeghị m ike ime ya. Ozi ọ bụla nke baara m uru ga -enwe ekele.
Zaghachi Mario Mey